Vaovao - "COVID-19 antigen quick test (Colloidal Gold)" avy amin'ny JBT dia nahazo ny fanamarinana avy amin'ny PEI Alemana sy ny fahombiazan'ny whitelist fanondranana.
"COVID-19 antigen quick test (Colloidal Gold)" avy amin'ny JBT dia nahazo ny fanamarinana avy amin'ny PEI Alemana ary ny fahombiazan'ny whitelist fanondranana
01. COVID-19 Antigen Schnelltest (Colloidal Gold) novolavolain'i Joinstar Biomedical Technology dia nahazo ny fanamarinana fampisehoana avy amin'ny institiota Paul Ehrlich. Miaraka amin'i Abbott, Roche, SD, BD, Siemens LumiraDX, ary orinasa malaza iraisam-pirenena hafa, Joinstar Biomedical Technology dia lasa iray amin'ireo mpanamboatra antigen vitsivitsy nankatoavin'ny PEI tamin'ny andiany voalohany eran-tany.
"Paul-ehrlich-institut" (PEI) dia misolo tena ny andrim-panjakana federaly alemana momba ny vaksininy sy Biomedisin, tompon'andraikitra amin'ny andrim-pikarohana momba ny fanafody sy ny maso ivoho mifehy. PEI koa dia manampahefana ambony federaly izay manao tatitra amin'ny minisiteran'ny fahasalamana federaly, ivon-toerana hiantohana ny fiantohana kalitaon'ny vokatra ra sy ny fitaovana fitiliana vitro. Izy io dia nomena anarana taorian'ny talen'ny mpanorina azy, mpitsabo aretin-tsaina ary loka Nobel, Paul Ehrlich.
02. Momba ny fitsapana antigen haingana
Nahoana isika no mila fitsapana antigen haingana?
Ny antigène dia manondro zavatra iray izay mety hamokatra antikôniôma, izy io dia zavatra mety hiteraka valiny fanefitra. Ny fanandramana antigen dia azo ampiasaina amin'ny dingana voalohan'ny aretina (aorian'ny fiandohan'ny soritr'aretina ao anatin'ny 1-5 andro na mandritra ny fe-potoana fampidirana volo aza) hahazoana vokatra tsara. Ny fomba fitiliana antigen dia mety kokoa amin'ny famotopotorana maharitra ny tranga ahiahiana ho an'ireo trangana virus coronavirus marobe ary tena mandaitra ho an'ireo faritra voan'ny areti-mifindra. Araka ny toe-javatra mafy sy sarotra, ny WHO, FIND ary fikambanana iraisam-pirenena maro hafa dia mampiroborobo ny detection Antigen ho fomba mahomby.
Anisan'izany ny UK, France, Slovakia, Slovenia, Georgia, ary firenena maro hafa dia efa nanomboka nividy sy nampihatra ny Antigen Rapid Test amin'ireo faritra be olona.
savony nasopharyngeal ho ohatra
Fihetseham-po ambony & manokana
Fotoam-baravarankely fohy, mamantatra ireo aretina amin'ny vanim-potoana voalohany sy ny vanim-potoana fampidirana volo, ilaina amin'ny fizahana mialoha. Ny diagnostika teo aloha dia mitondra fitsaboana tsara kokoa.
Azo ampiharina amin'ny scenario isan-karazany: andrim-panjakana voatendry (toy ny hopitaly); famerenana ny asa sy ny sekoly, ny fanaraha-maso tsy tapaka ny fepetra momba ny koronosy vaovao, sns.
Fomba iray dingana, mora ampiasaina, mampihena ny tsy fahitana sy ny lesoka hita vokatry ny hadisoana amin'ny fandidiana;
Omeo andiana reagents sy zavatra ilaina ilaina ilaina amin'ny fitiliana; tsy ilaina ny fitaovana;
Fandidiana haingana, miteraka 10-15 minitra;
Ny hafanan'ny fitehirizana: 2 ~ 30 ℃, tsy mila fitaterana rojo mangatsiaka;
Famaritana azo isafidianana: servings / boaty 25, servisy / boaty 1;
Fomba fiaraha-miasa marobe, manaiky OEM / ODM
04. Fahazoana mari-pahaizana:
Mari-pankasitrahana CE, lisitra fotsy momba ny fanondranana ao amin'ny Ministeran'ny Varotra
Voatanisa ao amin'ny tahiry vahaolana vahaolana fitsapana vahaolana momba ny coronavirus EU, tanisin'ny WHO-FIND Innovation Foundation, ary nandalo ny fitsirihana PEI Alemanina.
Fanamarihana fisoratana anarana any Alemana sy Italia
Fotoana fandefasana: Mar-12-2021